Fa maninona loatra no dia mahafatifaty ny olona toa izao ny fitiavana ho ambony sy lehibe? Mijery ny Hazo Fijaliana (43b-44). Tsy tian’ny Tompo ho talanjona sy ho maimay ny amin’ny fanasitranana mahagaga nataony fotsiny ny mpianatra sy ny vahoaka. Tiany ho fantatr’izy ireo ny hevitry ny asa izay ataony: dia ny fitiavan’Andriamanitra izay manome sy mahafoy ny tenany mihitsy hatramin’ny fahafatesana aza, mba hamonjena ny olona (Romana 5:8). Rehefa misy asa mahagaga ataon’Andriamanitra, aiza no asaintsika mitodika ny mason’ny mpanatrika? Aoka ho ny Hazo Fijaliana hatrany no aseho azy ireo! Ny fahefana, amin’ny fomba fijerin’izao tontolo izao (45-48). Tsy mbola takatry ny mpianatra ny zava-miafin’ny Hazo Fijaliana. Mbola ny eto an-tany no nibahana tao an-tsain’izy ireo. Tsy mahagaga raha izay handimby ny Mpampianatra no nampiady hevitra azy. Io fitadiavan-tseza io no manimba ny fifandraisana na eo amin’ny mpinamana, na eo amin’ny fiaraha-monina, fitadiavana fahefana hanjakazakana.Narodan’i Jesosy izany ary nambarany fa ny fanetren-tena no tena maneho ny fahefana (48b; Ohabolana 15:33). Firaisana ao anatin’ny fahasamihafàna (49-50). Fa maninona no fahita matetika ny fifandonana, fifaninanana, fifampitsaràna, eo amin’ny kristiana, indrindra avy amin’ny antokom-pinoana samihafa? Tsy izany moa no hitantsika eo amin’ny mpianatra eto? Hoy Jesosy: “... fa izay tsy manohitra anareo, dia momba anareo.” (50). Na dia samihafa aza ny mpino, samihafa ny kolon-tsaina sy ny fomba fijery, ny fandraisana an’i Kristy no maha-iray antsika (Jaona 1.12), ho tenan’i Kristy (1 Korintiana 12:13). Ndeha hotandrovina izany maha-iray ny tenan’i Kristy izany!